Tababbarka - Vondt.net
10 Jimicsi oo loogu talagalay Hip Bad
30 / 08 / 2016 /0 Comments/i Jimicsiga iyo Jimicsiga, Jimicsiyada xoog, tababarka/av waxyeelladayda
Dhibaato miskaha xun? Halkan waxaa ah 10 jimicsi oo wanaagsan oo miskaha ah oo bixiya awood kororsi, xanuun yar iyo shaqo fiican.
Xor baad u tahay inaad la wadaagto qof ay miskaha dhibsanayaan.
Dad badan ayaan had iyo jeer ku fiicnayn inay fiiro gaar ah u yeeshaan miskahooda ka hor intaanay bilaabin inay dhaawacmaan. Dhibaatooyinka sinta waxay yeelan karaan dhowr sababood, sida arthrosis, dhaawac, cillad muruqa iyo sida. Dhibaatada foosha xun ee miskaha ayaa ah inay naga cabsadaan inaan sameyno wixii aan runtii sameyn lahayn, taas oo ah, jimicsi iyo dhaqaaq. Halkan waxaa ah 10 jimicsi oo wanaagsan oo wanaagsan oo loogu talagalay adiga oo doonaya hawl fiican oo sinta ah. Si aad u sameyso qaar ka mid ah jimicsiyadan, waxaad u baahan tahay taraam tababar ah (waan ku faraxsanahay inaan kugula talinno) basaska yaryar) - waad awoodaa halkan ka iibso haddii la doonayo. Kuwa jilbaha xun, waxaan kugula talineynaa beige (iftiin dheeraad ah), jaalle (iftiin) ama cagaar (dhexdhexaad dhexdhexaad ah) laastik ah.
TALO: Hoos waxaad ka arki kartaa talo ku saabsan barnaamijka jimicsiga xanuunka sinta. Laakiin layliyada waxaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn qof walba, taasina waa sababta dhabta ah ee aan dhowr barnaamijyo misig ah ugu leenahay kanaalkayaga Youtube -ka. Waxyaabaha kale, barnaamijyo loogu talagalay kuwa qaba osteoarthritis sinta. Dhamaadka maqaalka, waxaan barnaamijka ku soo koobeynaa ku celcelin iyo tirooyinka tirada.
Fiidiyow: 10 Jimicsi Oo Lid Kaga Soo Horjeeday Hiip Bad
Halkaan waxaad ka daawan kartaa barnaamijka tababarka oo dhan fiidiyowga.
Ku soo biir qoyskeena: Xor ayaad u tahay inaad iska diiwaan gasho YouTube channel (dhagsii halkan). Halkaas waxaad ka heli kartaa barnaamijyo jimicsi oo bilaash ah, talo bixinno iyo talooyin loogu talagalay caafimaadka oo hagaaga, soo bandhigidda habab daaweyn oo kala duwan iyo waxtar badan. Talooyinka caafimaadka maalinlaha ah sidoo kale waad nagala socon kartaa Boggayaga Facebook. Ku soo dhawow!
Waxaa si dhakhso leh loo sameeyaa in la iloobo sida muruqyada kursiku ay muhiim ugu yihiin xasilloonida sinta iyo jilibka labadaba. Muruqyada gluteal adag waxay yareeyaan cadaadiska iyo culeyska miskaha.
Buundada waxaa loo sameeyaa iyadoo dhabarka loo seexiyo iyadoo lugahaaguna lugaha galeen oo lugahaaguna ay fidsan yihiin dhulka, iyadoo gacmahaagu ku nasanayaan dhinaca. Dhabarkaagu waa inuu noqdaa qalooc dhexdhexaad ah. Xor ayaad u dareemeysaa inaad kulushahay kursiga adoo sameynaya laylisyo fudud - halkaad si fudud u adkeyso muruqyada kursiga, ku hay ilaa 5 sekan kadibna mar kale sii daa. Tani waa layli firfircoon oo u sheegaya muruqyadaada inaad qorsheyneyso inaad sida ugu dhaqsaha badan u isticmaasho - taas oo iyaduna horseedi karta adeegsiga saxda ah inta lagu jiro jimicsiga, iyo yaraynta fursadda dhaawaca muruqyada. Markaad diyaar tahay, jimicsiga samee adoo isku keenaya muruqyada kursiga, ka hor inta aadan miskaha kor u qaadin oo aad sinta saqafka sare u qaad. Hubso inaad jimicsiga sameyso adigoo riixaya ciribta. Kor u qaadista miskaha dhabarka waxay ku jirtaa meel dhexdhexaad ah, oo aan badsanayn, ka dibna si tartiib ah gadaal ugu riix booska bilowga. Layligu waa la qabanayaa 8-15 ku celcelin, ka badan 2-3 gogol.
2. Kor u qaadista lugta dambe (oo leh ama aan lahayn jimicsi)
U jiifso dhinaca gacanta gacanta ku heysa horteeda iyo madaxa gacanta nasashada. Ka dib kor u qaad lugta kore dhaqdhaqaaq toos ah (afduub) oo ka durug lugta kale - tani waxay kuu horseedaysaa tababar wanaagsan oo ku saabsan kursiga qotodheer iyo murqaha miskaha. Ku soo celi jimicsiga 10-15 ku celcelis ah in ka badan 3 qaybood.
3. Meel ka-tagitaan hooseeya
Layligani wuxuu furayaa booska sinta, wuxuu kala bixinayaa muruqyada wuxuuna si firfircoon u dhaqaajinayaa dhabarka hoose. Ku billow meel fidsan ka dibna hoos ugu dhig lugta dambe si tartiib ah sariirta jimicsiga. Xusuusnow in jilibku uusan dhaafin karin caarada suulasha. Hubso inaad boos dhexdhexaad ah ku leedahay dhabarka hoose ka dibna qaado 4 ilaa 10 neefsasho qoto dheer. Ku celi 4-5 xirmo ama inta jeer ee aad dareento inay lagama maarmaan tahay.
4. Natiijada dhinaca Miniband
Layligani waa tababar aad u wanaagsan muruqyada kursi, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara xasilinta sinta, oo sidaas awgeed, xasilloonida jilibka. Raadi koox tababbaran sidan oo kale deynta (ku habboon jimicsiga noocan ah) ee lagu xiri karo labada canqow ee anqeybta dhexdooda ah.
Ka dib istaag cagahaaga ballac ahaan si ay u jirto iska caabin jilicsan oo ka soo bilowda suunka ilaa garkaaga. Jilibyadu waa inay xoogaa duubnaadaan oo kursigu waa inuu xoogaa gadaal u laaban yahay nooc ka mid ah booska bartamihiisa.
Kadib talaabo dhanka midig lugtaada midig qaado ugana tag lugtaada bidix taagan - iska hubi inaad jilbahaaga adkeyso - ka dibna ku noqo booska bilowga. celiyaan 10-15 ku celcelin, labada dhinacba, xagga sare 2-3 gogol.
Kordhinta muruqyada iyo kursiga
Ujeedada layligani waa in la helo dabacsanaan badan muruqyada muruqyada - muruqyada la ogyahay inay gacan ka geystaan ​​dhibaatooyinka jilibka haddii ay aad u adag yihiin. Ku jiifso sagxadda dhabarkaaga dhabarka, iyadoo la doorbidayo sariir tababbar ah oo taageero laga helo qoortaada hoostiisa.
Ka dib hal lugo dhinaca feedhka ka dibna ku qabo bowdada dhabarka labada gacmood. Ku fidi lugtaada dhaqdhaqaaq deggan oo deggan, halka lugta adiga kuu jihaysan. Ku hay jimicsiga dharka mudo ah 20-30 ilbidhiqsi inta aad qaadanayso neefsasho qoto dheer Ka dib jilibkaaga u soo laabo oo ku noqo meeshii laga bilaabay. Haddii kale waxaad isticmaali kartaa shukumaan ama wax la mid ah si aad u fidiso fidin dheeraad ah xagga dambe ee bowdada.
Ku celi jimicsiga 2-3 jeer dhinac kasta.
6. Layli fidinta hal-lugood iyo 7. natiijada
Laba layli aad u toosan oo adag.
- Layli dheere oo hal lug ah ayaa lagu sameeyaa isagoo taagan dhinac walba, kahor inta aan lugahaaga kor loogu qaadin booska gadaal u riixaya (sida ka muuqata sawirka) - layligu wuu ku celcelinayaa 3 qaybood oo ah 10-12 jeer oo ku celcelin ah.
- natiijada waxaa lagu samayn karaa dhowr siyaabood, labadaba iyada oo aan la isticmaalin buugga tilmaanta miisaanka. Maskaxda ku hay qaanuunka "ha ku jilbaynin suulasha lugta ah" sababtoo ah tani waxay u horseedi doontaa cadaadis aad u badan jilibka waxayna sababi kartaa dhaawac iyo xanaaq labadaba. Jimicsi fiican waa jimicsi si sax ah loo qabtay. Ku celcelinta iyo isbarbardhiggu way ku kala duwan yihiin qof ilaa qof - laakiin 3 qaybood oo 12 ah oo ah ku soo celcelinno ayaa ah waxa la higsanayo
8. Jimicsiga Oyster
Layli aad u wanaagsan oo loogu talagalay in si habboon loogu isticmaalo muruqyada kursiga, gaar ahaan dhexdhexaadinta gluteus. Waxaad dareemi doontaa inay 'ku gubtay' kursiga xoogaa kadib dhowr jeer oo ku celcelis ah - adoo soo jeedinaya inaad, badan tahay, inaad wiiqeyso qaybtaan muhiimka ah ee murqaha taageera.
U jiifso dhinaca uurjiifka - muruqyada 90 cidhiidhi ku jira iyo jilbaha midba midka kale ka kale. U ogolow gacantaada hoose inay u noqoto taageero sidii madaxaaga hoosta oo u oggolow gacantaada kore inay jirkaaga ama sagxaddaada ku nasato. Jilibka kore ka qabo jilibka hoose halka aad ciribta ka ilaalineyso midba midka kale - waxoogaa sidii lohod oo furmaya, oo magaca ka soo baxay. Waxaad xoogga saartaa qandaraasyada murqaha kuraasta markaad jimicsiga sameyneyso. Ku celi layliga kore 10-15 ku celcelin ka badan 2-3 gogol.
9. "Daanyeerku wuu socdaa" oo leh dabacsanaan
“Socodka bahalku” waa jimicsi aad u fiican jilbaha, miskaha iyo miskaha. Wuxuu isku daraa wixii aan barannay, oo aan adeegsannay, 5tii layli ee hore hab wanaagsan. Kaddib wakhti yar oo layligaan ah, waxaad dareemi doontaa inuu si qoto dheer u gubanayo kursiga. Layligan, waxaan ku talinaynaa in la sameeyo tolidda imini band (cagaarku wuxuu noqon karaa xoog weyn oo lagu bilaabo).
Isticmaal suun yar oo lagu dhejin karo labada anqow sida wareegga weyn. Ka dibna istaag cagahaaga oo ballaadhkoodu yahay garabka si ay u jirto iska caabin fiican oo ka timaadda suunka ilaa kuraamahaaga. Markaa waa inaad socotaa, intaad ka shaqeyneyso inaad lugahaaga kala fogeyso garabka, waxoogaa sida Frankenstein ama hooyo - sidaa darteed magaca. Jimicsiga waxaa lagu sameeyaa gudaha 30-60 ilbidhiqsi ka badan 2-3 gogol.
10. Ananda Balasana (Booska Yoga ee Cajirka Gudaha)
Meel yoga ah oo ku fidsan gudaha bowdooyinka - muruqyada aan wada ognahay inay adkaan karto in si wanaagsan loo kala bixiyo. Way fidsan tahay waxayna siinaysaa dabacsanaan badan sinta iyo kursiga. Ku jiifso sariir jimicsi oo jilbahaaga u laabo dhinaca laabta - ka dibna gacmahaaga saar cagahaaga dushiisa oo si tartiib ah u soo jiid illaa aad ka dareento inay fidsan tahay. Ku hay 30 ilbiriqsi oo ku celi xirmooyinka 3-4. Kala duwanaanshaha horumarka ayaa ah inuu gacmahaaga ku qabsado gudaha cagahaaga. Layligani wuxuu noqon karaa dhammaad wanaagsan jimicsiga ka dib.
Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto YouTube eller Facebook haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama la mid ah oo ku saabsan jimicsiga ama murqahaaga iyo dhibaatooyinka laabatada.
Soo koobid: Barnaamijka jimicsiga - 10 Jimicsi oo Wanaagsan oo loogu talagalay Sinta Xun
Haddii aad rabto inaad si joogto ah u samayso barnaamijkan, waxaan kugula talineynaa inaad marka hore bilowdo sameynta laba illaa saddex jeer toddobaadkii. Markaad sii xoogaysato, waxaad kordhin kartaa ilaa afar jeer toddobaadkii. Laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah sii socoshada - markaa waxaad ku fogaanaysaa laba koror toddobaadkii muddo dheer. Xusuusnow sidoo kale in tirada soo noqnoqoshada la waafajin karo taariikhdaada caafimaad iyo xaaladahaaga.
Qaadista Pelvic-1-8 reps x 15-2 qaybood
2. Kor u qaadista lugta dambe - 10-15 reps x 3 qaybood
3. Natiijada Hooseysa-Qabo 10-15 ilbidhiqsi x 4-5 qaybood
4. Natiijada dhinaca leh Knit - 10 reps x 2-3
5. Fidinta Xarkaha - 30 sekan x 3 qaybood
6. Kordhinta hal-lug: 10 reps x 3 set
7. Natiijada - 10 reps x 3 qaybood
8. Mussel - 10 reps x 3 set (labada dhinacba)
9. Socodka bahalku - 30 sekan x 3 qaybood
10 Ananda Balasana (Fidinta bowdada gudaha) - 30 sekan x 3 qaybood
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/darlige-hofter-700.jpg?media=1648573622 398 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-30 12:37:422021-08-18 11:50:2410 Jimicsi oo loogu talagalay Hip Bad
8 jimicsi oo loogu talagalay xanuunka dhabarka
23 / 09 / 2016 /0 Comments/i Jimicsiga iyo Jimicsiga, Soo noqo, Jimicsiyada xoog, tababarka/av waxyeelladayda
Miyaad la xanuunsan tahay dhabar xanuun? Halkan waxaa ah 8 jimicsi oo fiican oo loogu talagalay dhabarka kuwaas oo siiya xoog badan muruq, xanuun yar iyo shaqo ka sii wanaagsan. Xor baad u tahay inaad la wadaagto qof aad taqaanid kaasoo dhabarka xun qabo.
Isku-darka layliyadaan, waxaan kugula talineynaa inaad kordhiso jimicsigaaga maalinlaha ah, tusaale ahaan inaad ku socsocoto meelaha adag ama dabaasha. Haddii aad hore u soo heshay cilad-sheegis, waxaan kugula talineynaa inaad ka hubiso takhtarkaaga rugta caafimaadka (takhtar, chiropractor, fisyoterapist ama wixii lamid ah) bal in jimicsiyadan adiga kugu habboon yihiin. Xusuusnow inaad sidoo kale heli doonto dhowr barnaamijyo jimicsi kanaalkeena YouTube (wuxuu u furaa daaqad cusub) - iyo inaad daawan karto fiidiyowyada jimicsiga oo hoos ugu sii dhacaya maqaalka.
1. «mindi isku laaban» kubbadda daweynta
Kani waa jimicsi aad ugu roon saxannada iyo laf-dhabarka dhabarka. Isla mar ahaantaana, waa mid aad u culus oo waxtar u leh murqaha muruqyada. Kani waa layli ay tahay inaad tartiib tartiib ula qabsato, qaasatan hadaadan caadaysnayn inaad jimicsiga ku samayso sidan. Haddii ay kugu adkaato inaad ku celcelin dheeraad ah sameyso, waxaan kugula talineynaa inaad ku bilowdo inta aad kari karto - ka dibna si tartiib tartiib ah u kordhiso tirada ku celcelinta markii aad sii xoogaysato.
A: Bilaabidda booska jimicsiga. Ka bilow lugaha kubbadda jimicsiga iyo gacmahaaga dhulka, sidii adigoo riixaya.
B: Si tartiib ah u jiid kubbada hoostaada. Ka dib si tartiib ah ugu laabo booska bilowga.
Layligu waa la fuliyaa 8-10 ku celcelin ka badan 3-4 gogol.
2. "Daanyeerku wuu socdaa" oo leh dabacsanaan
“Socodka bahalku” waa jimicsi aad u fiican jilbaha, miskaha iyo miskaha. Wuxuu isku daraa wixii aan barannay, oo aan adeegsannay, 5tii layli ee hore hab wanaagsan. Kaddib wakhti yar oo layligaan ah, waxaad dareemi doontaa inuu si qoto dheer u gubanayo kursiga. Layligan waxaan ku talinaynaa in la sameeyo taraamka tababarka fiican (Gul eller cagaaran).
Raadi koox jimicsi (doorbidaya ku habboon jimicsiga noocan oo kale ah - si xor ah u hubi dukaankeenna internetka ama toos noo weydii) oo lagu xiri karo labada lugood sida goobada ballaaran. Markaa istaag cagahaaga oo kala-ballaadhsan oo kala fog si ay u jirto iska caabin wanaagsan laga bilaabo suunka illaa anqawyadaada. Markaa waa inaad socotaa, intaad ka shaqeyneyso inaad lugahaaga kala dhigto garab ballaaran, waxyar sida Frankenstein ama mummy - markaa magaca Jimicsiga waxaa lagu sameeyaa gudaha 30-60 ilbidhiqsi ka badan 2-3 gogol.
Ujeedada layligani waa in lagu helo dabacsanaan badan muruqyada muruqyada - muruqyada la ogyahay inay gacan ka geystaan ​​dhibaatooyinka dhabarka haddii ay aad u adag yihiin. Ku jiifso sagxadda dhabarkaaga dhabarka, iyadoo la doorbidayo sariir tababbar ah oo taageero laga helo qoortaada hoostiisa.
Ku celi layliga 2-3 jeer dhinac kasta.
Waxaa si dhakhso leh loo sameeyaa in la iloobo sida muruqyada kursiku ay muhiim ugu yihiin xasilloonida sinta iyo jilibka labadaba. Muruqyada gluteal xoog leh waxay yareeyaan cadaadiska iyo culeyska dhabarka.
5. Jimicsi Yoga: Urdhvamukhasvanasana (Booska eyga qiimeeya)
Jagadan yoga waxay furaysaa laabta, kala bixisaa muruqyada caloosha waxayna u dhaqaajisaa dhabarka hab wanaagsan. Ku billow inaad si siman dhulka u seexatid iyadoo calaacashaadu hoos u dhacayso sagxadda feedhaha dhexdeeda. Ka dib lugahaaga isku soo xoori oo riix dusha cagahaaga oo sagxadda dhulka ku garaacda - isla mar ahaantaana u isticmaal xoogga dhabarkaaga, ee ha u isticmaalin gacmahaaga, inaad laabtaada ka saarto sagxadda - waa inaad dareentaa inay waxyar u kala fidsan tahay xagga dambe - hubi inaadan wax badan qaadan . Lugahaaga toosan oo xaji booska 5 ilaa 10 neefsasho qoto dheer. Ku celi inta jeer ee aad isleedahay waa lagama maarmaan.
6. Jiifinta kursiga iyo dhabarka hoose
Layligani wuxuu fidiyaa muruqyada gluteal iyo piriformis - kan dambe waa muruq inta badan ku lug leh xanuunka dhabarka iyo miskaha. U jiifso sagxadda dhulka iyadoo dhabarkaagu hoos u yaal yahay, iyadoo la doorbidayo sariirta lagu jimicsado oo qoortaadu taallo Ka dib u laabo lugta midig oo saar bowdada bidix. Kadib qabso bowdada bidix ama lugta midig oo si tartiib ah dhankaaga ugu soo jiido ilaa aad ka dareento inuu si qoto dheer ugu fidsan yahay dhabarka bowdada iyo murqaha muruqyada dhinaca aad u fidiso Ku hay culeyska 30 ilbiriqsi. Kadib ku celi dhinaca kale. Lagu qabtay wax ka badan 2-3 nooc dhinac kasta.
7. Kor u qaadida gadaal
Kor u qaadista dhabarku waa mid ka mid ah laylisyada yar ee ay leeyihiin saameyn la xaqiijiyay oo sababa hypertrophy (cufnaanta muruqyada weyn) oo ku jira maaddada loo yaqaan 'lumbar multifids'. Multifids-ka ayaa noqday kuwo aad u badan oo loo aqoonsan yahay qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, dhaawaca ka hortagga muruqyada dhabarka ee aan haysanno. Iyaguna waa la dhahaa qoto dheer, murqaha paraspinal, taas oo ka tarjumaysa taas Waxay ku fadhiyaan hoosta laf dhabarta - sidaas darteedna siyaabo badan ayaa loo tixgeliyaa difaacdeena koowaad ee ka dhanka ah dhibaatooyinka dhabarka daran.
Ka bilow jirka iyo qaybta sare ee caloosha oo laga taageerayo kubbadda daweynta. Si tartiib ah kor ugu qaad ilaa dhabarkaagu si buuxda u kaco. Waad dooran kartaa haddii aad rabto gacmahaaga madaxaaga gadaashiisa ama kor u soo qaad dhinaca.
kamay helin: 5 reps x 3 set ama 10 reps x 3 set (eeg inta aad maareysid ka dibna xulo mid ka mid ah xirmada).
8. Luga ilaa xabadka (jimicsiga gadaashiisa iyo kursiga hoose)
Layligani ujeedadiisu waa inuu kordhiyo dhaqdhaqaaqa dhabarka hoose oo uu kala bixiyo muruqyada kursiga iyo dhabarka hoose. Ku jiifso sagxada dhulkaaga dhabarkaaga, iyadoo la doorbidayo sariir tababbar oo taageero qoortaada hoostooda ah Lugahaaga kor ugu qaad ilaa ay ka soo laaban yihiin.
Kadib hal lugo kor u qaad ilaa aad ka dareento inuu si tartiib ah kursigaaga ugu fidinayo iyo dhabarka hoose. Ku qabo kala-bixinta illaa 20-30 ilbidhiqsi oo ku celi 3 jeer dhinac kasta.
Bedel ahaan, waxaad ku jejin kartaa labada lugaha ilaa feeraha - laakiin waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho kaliya marka aad xanuun yar dareento, maadaama ay culeys sareyso sareyso diskiga qeybta hoose ee dhabarka.
LAYLIGA DHAQAALAHA - «qaboojinta»: 4 Jimicsiyada fidinta ee ka dhanka ah Stiff Back
Fiidiyowga hoose, waxaan ku soo bandhignaa afar jimicsi oo fidinta ah oo loogu talagalay dhabar adayg iyo xanuun. Jimicsiyada u jilicsan oo kugu habboon xanuunka dhabarka ee nolol maalmeedka. Kuwani waxay u fiican yihiin qaboojinta ka dib markaad socod ama jimicsi sameysay - ama waxaad u isticmaali kartaa inaad "dib u hesho" subaxdii, haddii ay ku dhibayso adkaanta subaxdu. Waxaad daawan kartaa fiidiyaha adiga oo gujinaya sawirka hoose - sidoo kale waxaad ka heli kartaa barnaamijyo tababar noocan oo kale ah kanaalkayaga YouTube (Vondt.net).
YouTube: Xor ayaad u tahay inaad iska diiwaan gasho YouTube channel. Halkaan waxaad ka heleysaa barnaamijyo jimicsi oo wanaagsan iyo talooyin caafimaad. Fiidiyowgaan waxaad ku arki kartaa afar jimicsi oo fidin wanaagsan oo dhabarka adag - oo leh sharraxaad.
- Ma ogtahay in dhabarkaaga hoose sidan ugu egyahay MRI-ga?
PAGE xiga: - Dhabar xanuun? Waa inaad tan ogaataa!
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan fariimaha iyo su'aalaha 24-48 saacadood gudahood)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/8-øvelser-for-dårlig-rygg.jpg?media=1648573622 443 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-09-23 01:40:092020-06-20 19:42:558 jimicsi oo loogu talagalay xanuunka dhabarka
Bogga 1 ee 12123>»